Imperator: Roma Yakakura Strong Musoro Kuuya Mwedzi Uno | Linux Vakapindwa muropa
Imperator: Roma iguru zano rezita iyo zvakare ichaburitswa yeLinux mwedzi uno, pamwe neMac neWindows. Yakagadziriswa neParadox Development Studio, uye ichatengeswa kuburikidza akasiyana mapuratifomu kana online zvitoro, senge Paradox, Humble Store, Gogi uye zvechokwadi vheti yedu inodiwa teinda, chiutsi. Zuva ratinoziva rekutanga ndiApril 25 uye mutengo wacho ungangoita 39,99.
Vagadziri vayo vakashanda nesimba kuisa iyi nyaya zvichibva paImperial Roma nehunyanzvi hwekugadzira hwevakakurumbira Johan andersson. Iyo nyaya yakavakirwa pamusoro pekutonga kwemazana ehumambo hwekare, dzimba uye nyika dzinoda kuparadzira kubwinya kwavo muEurope yose. Ndokunge, zvinoita senge yechinyakare yezano, asi rakavandudzwa uye riine maficha matsva achienzaniswa nemamwe mazita ekuremekedza ayo atove pamusika.
Pakati pake featuresKana iwe uri kushamisika kuti chii chaunotarisira kune ino chaiyo-yenguva zano zita, isu tine simba rekutonga dzekare nyika, Roma, Egypt, Anatolia, Macedonia, Persia, nezvimwe. Humambo hukuru hwemauto hwatinofanirwa kugadzira nekudzivirira. Tichafanirwa kubata nemadzishe makuru uye vakundi venguva, vanhu vazhinji vanochinja, vanozoona kukosha kwavo nechinangwa mukati mehushe.
Pachave nekutsvagisa kukuru uye sosi manejimendi manejimendi, kutengesa, nezvimwe, sezvaungatarisira, asi iwo masisitimu akajairika. Zvese zvaunoda kuti ugutse vanhu vako uye uvake hondo huru. Kuti tizvipe zvimwe zvechokwadi, tichava nevasori, magamba emuno, huwori, hunyanzvi nemumhanzi, mitemo mitsva, zvitendero, chitsotsi, nezvimwewo, ndokuti, zvakanyanya kushanduka pane mimwe mitambo yemavhidhiyo yemhando imwe chete, uko zvinhu zvese zvichinyatso fungidzirwa uye isu tinongoona dzimwe shanduko senge vanhu vakatarisana, iyo nguva yavakatarisira uye nezvimwewo zvishoma, asi masimba akafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Imperator: Roma huru zano zita rinouya mwedzi uno
5 mitauro mitauro iwe yausingafanire kudzidza mu2019